Horudhac: Aston Villa vs Manchester City…(Steven Gerrard oo taariikh u dhigi kara Villa & Rikoorka wanaagsan ee ay City ka heysato dhiggeeda) – Gool FM
(Birmingham) 01 Dis 2021. Naadiga Aston Villa ayaa caawa soo dhoweyneysa kooxda difaacaneysa horyaalka Premier League ee Manchester City iyadoo Jack Grealish uu ku laabanayo garoonka kooxdiisii markii ugu horreysay tan iyo markii ay Citizens 100 milyan oo gini halkaas kaga soo qaadatay suuqii xagaaga.
Villa ayaa kaalinta 13-aad kaga jirta kala sarreynta horyaalka Ingiriiska iyadoo leh 16 dhibcood, waxayna wajaheysaa kooxda ku jirta kaalinta labaad ee horyaalka waxayna Man City leedahay 29 dhibcood, kaliya hal dhibic ayayna u jirtaa hoggaanka oo ay Chelsea 30 dhibcood ku heysato.
Aston Villa ayaa caawa weyneysa weeraryahankeeda Danny Ings oo dhaawac qaba, waxaana diiwaanka xiddigaha maqan uu kula biiray Bertrand Traore iyo Trezeguet, halka Tyrone Mings iyo John McGinn ay hal hurdi u jiraan inay ganaax kulan ah la kulmaan oo ay jaalleyaasha u uruuraan.
Manchester City ayaa qiimeyneysa xaaaladda kubbad abuurayaasheeda Jack Grealish, Kevin De Bruyne iyo Phil Foden, iyadoo labada laacib ee reer England ay kusoo laabteen tababarka kooxda lana filayo inay daqiiqado ka helaan kulankan, waxaase ka maqnaan doona Aymeric Laporte oo ganaax ku seegaya ciyaartan.
Manchester City ayaa adkaatay toddobadii is-arag ee ugu dambeysay tartammada oo dhaniyadoo dhalisa 23 gool halka laga dhaliyay kaliya saddex gool.
Barbarro 0-0 ahaa oo horyaalka ka tirsanaa isla markaana ka dhacay Villa Park bishii November ee sanadkii 2015 ayaa ah marka kaliya ee ay Man City ku fashilantay inay garaacdo Villa 11 kulan oo ka dambeysay guuldarradii 3-2 ahayd ee ka tirsaneyd horyaalka sanadkii 2013.
Steven Gerrard ayaa noqon kara macallinkii ugu horreeyay ee Aston Villa guul ku hoggaamiya horyaalka saddexdiisa kulan ee ugu horreysa xukunkiisa.
Villa ayaa isku dayeysa inay xilli ciyaareedkii labaad oo xiriir ah ay garoonkeeda ku garaacdo koox horyaalka difaacaneysa taasoo markii labaad dhici karta iyadoo sidaas hore u sameysay 1975-76 iyo 1976-77.
John McGinn ayaa durba barbarreeyay goolashiisa saddexda ah ee uu dhaliyay mid walba oo ka mid ah labadii xilli ciyaareed ee lasoo dhaafay horyaalka Premier League.
Manchester City oo guulo xiriir ah gaartay shantii ciyaarood ee ugu dambeysay tartammada oo dhan ayaa dooneysa inay guul hesho si ay u barbarreyso guulaheedii ugu badnaa hal sano gudahiis oo ah 30 guul oo ay hore u gaartay 2017 iyo 2019.
Man City ayaa 15 guul oo xiriir ah ka gaartay horyaalka kulammada Arbacada waxaana guuldarro maalintan oo kale soo gaarta ugu dambeysay maalmihii Boxing Day ee sanadkii 2015 markaas oo ay ku hor jabtay Leicester City.
Raheem Sterling ayaa labo gool u jira inuu noqdo ciyaaryahankii 32-aad ee 100 gool ka dhaliya horyaalka Premier League.